Kedu ka esi ehichapu ndọtị mkpakọ?
Mgba akwa na akwa akwa - akụkụ ndị uwe ejiji ndị inyom, nke chọrọ ịkpachara anya nke ọma. Ihe nkedo mkparịta ụka na-eme ka ọ dịkwuo mma n'ilekọta ejiji. Ọ bara uru ịmebi ọbụna otu iwu, ihe niile na-emetụtaghị ya. Ọ ga-ekwe omume ihichapu nkedo mkpakọ , na otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi, anyị ga-atụle n'okpuru.
Kedu ka ị ga-esi ehichapu nkwụsị mkpakọ?
Ka anyị malite n'ajụjụ nke ugboro ole ị ga-ehichapụ mkpakọ mkpakọ. I nwere ike iche na inwe mmetụta uche gụnyere itinye ntakịrị mmetụta nke ntanetị, ya mere ịsa kwesịrị ime dị ka mmetọ ahụ. Otú ọ dị, nanị nkedo nke sọks na-eduga n'iji asa kwa ụbọchị. Ma ọ bụghị ya, ihe niile akpụkpọ ahụ na uzuzu ga-esi na ya pụta.
Okwesiri ihichapu ihe nkedo na mmiri na-ekpo ọkụ, ebe ọ bụ na ọbụna ntakịrị ọnọdụ nke okpomọkụ ga-eduga na iyi na ụda nke ihe onwunwe ha. A na-atụ aro ịsacha naanị aka, n'ihi ya, ọ dị mfe ịchịkwa ọnọdụ mmiri. Ma ọ dịghị onye na-egbochi gị iji igwe asa. Mana nke a bụ ọchịchị dị jụụ na-enweghị ntụgharị na 30 Celsius.
Na-esote, anyị ga-achọpụta ma ọ ga-ekwe omume ihichapu mkpakọ mkpakọ na powders. Ọ dịghị ihe ọ bụla. Akpa, ọ bụ ihe na-eme ihe ike, na-eduga ngwa ngwa ngwa ngwa. Tụkwasị na nke ahụ, powders enweghị ike ịchacha nke ọma site na ákwà, nke na-ebelata mmetụta ahụ. A na-enye ya ohere iji gels mmiri maka ịsa uwe ụmụ, ma nke a bụ obere ncha nwantakịrị.
Ọ dị ezigbo mkpa na ajụjụ banyere otu esi ehichapu mkpakọ mkpakọ, echefula banyere ịkpachara anya. Akwụsịla agbagha, ma ọbụnadịdị na-amanye akwa ahụ. Anyị na-etinye ha na akwa nhicha ma mee ka mmiri ahụ banye n'ime ya.
N'ikpeazụ, jide n'aka na ị ga-echeta banyere mkpụrụ ndụ silicone, ọ bụrụ na ọ bụla. Ghichaa ihe nkedo mkpịsị na nlezianya dịka o kwere mee, na-emetụbeghị silicone. Nke a ga-eduga na iyi na nkwụsị nke ngbanwe. Anyị na-etinye siliki na soda na mmanya. Na mmiri ahụ adịghị arịgo, ị nwere ike kee ebe dị n'okpuru silda silicone.
Esi ewepu mgbidi?
Esi mee ka ọla ọcha dị ọcha?
Kedu ka esi ehicha kapeeti?
Esi ewepu iko?
Esi ewepu ero n'ime okpuru ulo?
Mbụ n'ime ụlọ - ihe kpatara ya
Kedu ka esi mee ihe dị ọcha?
Igwe na mposi - imewe
E ji osisi rụọ
Kedu ísì ọ na-adighi-anabata?
Nri bred maka achịcha achicha
Zinerite - analogues
Ememe ntụrụndụ nke ụtaba
Uhie ejiji maka agbamakwụkwọ
Liam Neeson boro ebubo: "Ugbu a na Hollywood enwere" ichu nta "
Kedu ahịa m nwere ike ime?
Owuwu Afọ Ọhụrụ na windo
Salad radish na Mayonezi